Goorma ayaan wac booliiska? | USAHello | USAHello
Waxaa wanaagsan in la ogaado waxa la sameeyo marka ay jirto xaalad degdeg ah. Ogaanshaha marka u wacdo boliiska waa muhiim. Marka aad wacdo booliiska, waxay kaa caawin kartaa naftaada ilaaliso iyo sidoo kale qayb ka ahaanshaha muwaadin wanaagsan. Waxaad wici kartaa booliiska ka phone kasta oo meel kasta oo USA adigoo garaacaya 911.
Goorta la waco booliiska
Police jiraan in loo yeedho in xaalad deg deg ah oo sabab kale.
Wac boliiska oo dhan oo ka mid ah xaaladaha degdegga ah ee soo socda:
Ha u qaadan qof kale ayaa mar horeba loo yaqaan booliska marka wax laga shakiyo ka dhacaya. Dadka ka waaban inaad wacdo boliiska cabsi khatar ku jiraan ama ka qayb qaadashada. Si kastaba ha ahaatee, booliska ay doonayaan in ay caawiyaan hortago dembiyada.
Inay u yeedho booliska, wac 911. Is deji markii ugu yeeray oo ku siin magacaaga, cinwaanka, iyo lambarka taleefoonka. Haddii aad isticmaalayso telefoonka gacanta ah, bixiyaan gobolka iyo magaalada aad ka soo wacayso. Markaas u sheeg qofka sababta aad ugu yeeray. Raac tilmaamaha lagu siiyo. Tusaale ahaan, Qofta ka dhihi kara, “Joog on line ah,” ama “Ka tag dhismaha.”
Maxaa dhacaya markaad wacdo booliiska
Inta badan qaybaha booliska American leeyihiin xarunta isgaarsiinta a. The askari oo bilays ah shaqaalaha xarunta isgaarsiinta gaari raadiyaha ah in baabuurta ay. Shaqsiyaadka boliiska ah waxa kale oo lagu qaado gashto, sida samaacado. baabuurta Bilayska ayaa kombiyuutar ku xiran network ah. computer ayaa u ogolaanaya inay aragto macluumaadka gaadiidka, diiwaanka dembiyada, iyo macluumaad kale oo xasaasi ah.
saraakiisha fulinta sharciga, ama sarkaal oo bilays ah, waxaa la siiyaa awoodaha qaarkood si ay u ay shuqul qaban. Waxay ku kala duwan mas'uuliyadaha.
Qabashada looga shakisan yahay dambiilayaasha
Marka ay jirto sabab lagu aamini karo in qof ayaa dembi qatar ah, sarkaal handcuff karo iyo xiraan qof. Awoodaha fulinta sharciga waxaa caadi ahaan la dhaqan gelin oo kaliya in kiisaska sharciga la jebiyey iyo tuhunsan yahay waa in la aqoonsado oo la qabtay. Dembiyada waxaa ka mid ah tuugada, ka ganacsiga daroogada, dil, iyo dhaca. Qofka la xiray waxaa loo qaadi doonaa saldhiga boliiska ama xabsi ku xiran damiin ah.
Marka askari oo bilays ah ayaa la soo baxay booliska bulshada, ay ujeedada ugu weyn waa in ay ilaaliyaan nidaamka. Shaqadoodu in qofku ilaalinta nabadda iyo ka hortagga dabeecadaha taas oo keeni karta dadka kale. Ka Hortagga u dhaxeysa gelintu in dagaal in la joojiyo oo cod music ciyaaro. Xaaladahan xaaladda la maareeyaa si taxadar halkii dambi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in mararka marka xaaladahan xad kartaa sharciga.
Bixinta gargaarka degdegga ah, gargaar gaari, dalxiiska, iyo waxbarashada dadweynaha
Waa kuwee booliiska?
fulinta sharciga waa mid ka mid ah saddexda qaybood ee system.The cadaaladda dembiyada Maraykanka ee qaybaha kale waa maxkamadaha sharciga iyo kaabidda (ciqaab iyo xabsiyada). fulinta sharciga waxaa maamula dhowr hay'adaha dowladda. hay'adaha kala duwan u wada shaqeeyaan si ay isugu dayaan in ay joojiyaan dambiyada. Waxaa jira saddex nooc oo kala duwan oo hay'adaha:
fulinta sharciga Federaalka
Federaalka waxay ka dhigan tahay in la sameeyo dalka oo dhan, iyo hay'adaha dawladda dhexe u leeyihiin amar ay dhaqan sharciga oo dhan USA. The Department of Justice ayaa mas'uul ka ah sharciga heerka federaalka. hay'adaha kale ee ka mid ah Bureau Federaalka ah ee Baarista (FBI), Maamulka Fulinta Daroogada (Skov-), Horjoogayaal Service Maraykanka, iyo Xafiiska Federaalka ee Xabsiyada iyo kuwa kale.
fulinta sharciga State
Hay'adaha State waxay bixiyaan adeegyo sharci fulinta ee guud ahaan ay gobolka. waajibaadkooda ka mid ah baaritaan iyo roondo gobolka - waxa laga yaabaa inay u yeedhay bilayska gobolka ama ilaalinta jid. booliska Capitol, Booliska campus dugsiga, iyo booliska isbitaalka tihiin laamihii kale ee hoos hay'adda gobolka shaqeeyaan.
fulinta sharciga ee degmada
Magaalooyinka iyo tuulooyinka ay leeyihiin qaybaha booliska iyaga u gaar ah. Waxay la yeesheen fulinta sharciga gobolka si loo xaqiijiyo ammaanka. The magaalooyinka ugu waaweyn laga yaabaa in qaybaha aad u ballaaran booliska kumanyaal sarkaalka booliiska. magaalooyinka yar yar ayaa laga yaabaa in saraakiil dhowr ah.
Sidee si ay u noqdaan askari bilays ah
Macluumaadka waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.